ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: မြောက်ပိုင်းသမိုင်းနိဂုံးချူပ်လိုသည် ။
San Chaung Bobo
December 23, 2012 at 1:44pm ·
သမိုင်းနိဂုံးဟုပြောလိုလျှင် သမိုင်းအစ ကိုပြန်ပြောဘို့လိုမည်ထင်ပါသည် ။ လူသားများသမိုင်းဘယ်ကအစပြုခဲ့ပါလဲ ။ လူသားတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ( သို့မဟုတ် ) လူသားတစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းသည် လူသားများ၏သမိုင်းအစဟု ဖတ်ဘူးးပါသည် ။သမိုင်းဦးဘုံမြေခေတ်မတိုင်မှီကပင်လူသားတို့ နေထိုင်အသက်ရှင်သန်ရာတွင် အစုအဖွဲ့များနှင့် နေထိုင်လာခဲ့ကြရာ မိမိအစုအတွင်းမှ လူတစ်ယောက် ကိုအခြားအဖွဲ့မှလူများက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားလျှင် ( သို့မဟုတ် ) အနိုင်ကျင့် ညှင်းပန်းသတ်ဖြတ် ခဲံ့လျှင် … အဖွဲ့ ( သို့မဟုတ် ) လူသား ဂုဏ်သိက္ခာထိပါးရူ် ပြန်လည် ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခြင်းမှသည် လူ့သမိုင်းစခဲ့သည်ဟု မှတ်သားခဲ့ဘူးပါသည် ။ အဟိတ်တိရိစ္ဆာန်များသည် အင်အားဗဟိုပြု စဉ်းစားတတ်သည် ။ အားကြီးသူ က သာ အနိုင်အရှုံးသတ်မှတ်ပြဌာန်းပါသည် ။ လူသားသည် ထိုသို့မဟုတ် …။ ၁၉ . ၀၂ . ၁၉၉၂ ညတွင် ကို စိုးဝင်းသန်း ၊?….( မန္တလေး) ကို ကိုမျီုးဝင်းအမိန့် နှင်း အာစံကုန်းတွင် ကိုသန်းဇော်နှင့်အဖွဲ့တိုက သတ်ဖြတ်ခဲ့သည် ။ ကိုသန်းဇော် မှ ကိုမျီုးဝင်းကိုပြန်ပြောသော စကားကို မှတ်မီနေပါလိမ့်မည် ။ တော်တော်ခေါင်းမာတဲ့အကောင် သေခါနီးတောင် ကျောင်းသားကွ လို့ အော်သွားသေးသည် ။ ကိုစိုးဝင်းသန်းကျဆုံးပုံကို သိပြီးသားဖြစ်ပေလိမ့်မည် ။ သူ့ ၏ အသံ ( ကျောင်းသားကွ သတ်ချင်သတ် )နှင့် ခေါင်းသည် ကျင်းထဲသို့ ပြိုင်တူ ကျသွားသည် ။ အင်အားကြောင့် ကိုသန်းဇော်တို့ အနိုင်ရရှိခဲ့သည် ။ သို့သော်လူဖြစ်တည်မှု ဂုဏ်သိက္ခာကိုတော့ မရရှိသွားကြ ။ အနိုင်တော့ ရသွားသည် ။ သို့သော် ကိုစိုးဝင်းသန်း ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကိုတော့ မရ ရှိသွား…။
ပညာရှင်များ၏ အဆိုအရ လူသားသမိုင်းသည် ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး ၁၇၈၉-၁၇၉ တွင် နိုဂုံးချူပ်သည် ဟု မှတ်သားဘူးပါသည် ။( မှတ်မိသလောက်ပြန်ပြောရသည်မို့ အမှတ်မှားများလည်း ပါဝင် နိုင်သည် ဖြစ်ရာ မှားသည့်အချက်မျုားကို ပြင်ဆင်သွားပေးပါရန်ပြောလိုပါသည်)။ ထိုစဉ်က ပြင်သစ်တွင်လူဝီ ၁၄ အုပ်ချူပ်စဉ်ကဖြစ်သည် ။ ဘုရင်သည် တိုင်းရေးပြည်ရာများကိုစိတ်မ၀င်စားဘဲ အပျော်အပါးများတွင်သာ အချိန်ကုန်လေ့ရှိသောကြောင့် တိုင်းပြည် ရှိ ပြည်သူလူထုမှာ စီးးပွားရေး ၊ လူမှုရေး ၊ တရားစီရင်ရေး ဘက်ပေါင်းစုံတွင် အခက်အခဲ အကျပ်အတည်း များဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရပါသည် ။ လူဝီ ၁၄ ၏ကြင်ယာတော် မိဘုရားမေရီ ၏ သမိုင်းဝင်အဆိုအမိန့်သည် ထိုကာလ ၏ အခြေအနေကိုထင်ဟတ်ပြသလျက်ရှိပါသည် ။ ပေါင်မုန့်မရှိလျှင် ကိတ်မုန့်စား ပေါ့…။ ပြည်သူ့ဘ၀နှင့်ကင်းကွာလွန်းသည် ။လူသားများရဲ့ သမိုင်းဖြစ်သန်းမှု ကိုလေ့လာကြည့်သော် ယနေ့  အမေရိကန်သမ္မတနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရေးလောကမှလူများပြောကြားနေသော forward moving သည် အတိတ်ကာလမှာကတည်းကပင် စကားလုံးမဟုတ် ကျင့်သုံးမှုတစ်ခုအဖြစ် သမိုင်းတွင် ရှင်သန်ခဲ့သည်ဟုထင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ပိုင်ရှင် ခေတ်ထက် မြေရှင်ပဒေသရာဇ္ဇ်ခေတ်မှာပိုကောင်းသည် ။မြေရှင်ပဒေသရာဇ်ထက် သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ် ကိုပိုကောင်းသည်။လူတစ်ရာ ကိုကြောက်နေရမည့်အစား လူဆယ်ယောက်ကိုကြောက်နေရခြင်း ၊ လူဆယ်ယောက်ကိုကြောက်နေရခြင်းထက် လူတစ်ယောက် ကို ကြောက်ရခြင်းသည် ပိုကောင်းသည် ဟု မှတ်ထင်မိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာလူတစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ် ကြောက်နေရခြင်းသည် တရားမျှတမှု၊ တန်းတူမှု ကို ရနိုင်ရန်ခဲယဉ်းသည် ။လူသည် အတ္တနှင့်မကင်းဟုလက်ခံထားကြသည်။ ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှ မွေးဖွားပေးလိုက်သော အယူအဆမှာတန်းတူရေး ၊တရားမျှတရေးနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို မွေးဖွားပေးလိုက်သည် ။ မြန်မာ ရာဇ၀င်များတွင်လည်း ရှိဘူးပါသည်။ ဘုရင်ကိုသတ်ပြီးဘုရင်လုပ်ရူ် ရသည် …။ ပြင်သစ်ပြည်သူများ (သို့မဟုတ် ) ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးကိုဦးစီးဆောင်ရွက်သူများသည် ဘုရင်ကိုသတ်ပြီးဘုရင်လုပ်မည်ဟုသောအယူအဆကိုတော်လှန်ပြီး တန်းတူရေး ၊ တရားမျှတရေးနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ဦးတည်လိုက်ခြင်းသည် လူသားတို့အတွက်ပိုပြီးလူသားပီသစေပါသည် ။ပိုပြီးယဉ်ကျေးပြီး ဆင်ခြင်ထုံတရားကိုအားကောင်းလာစေပါသည်။ ဆရာကိုကျောင်ဝင်းစကားငှားသုံးရလျှင် ကြွက်သားမှသည် ဦးဏှောက်ဆီ သို့ ဦးတည် တည့်မတ်ပေးလိုက်ခြင်းးပင်ဖြစ်သည် ။ ထိုသို့သောအခြေနေမှ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲကြရာတွင် မတိကျ မရေရာအာမခံချက်မရှိသော ဥပဒေ ဘောင်မှသည် တိကျရေရာအာမခံချက်ရှိသော ဥပဒေ ဘောင်အတွင်း အသက်ရှင် နေထိုင်ခြင်းဟု ဖွင့်ဆိုသော လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆီသို့ တိုင်အောင်ပင်ဖြစ်သည် ။ ဆိုလိုသည်မှာ လူ့သမိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုသည် ခံစားမှုနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားတို့၏ အခန်းသည်လည်း အရေးပါသောအခန်းအဖြစ်တည်ရှိနေနိုင်ပါသည်။အခါခပ်သိမ်း ဆင်ခြင်တုံတရားအောက်တွင်သာရှိနေရမှာသာလူသားဟု အစွန်းရောက်မပြောလိုသော်လည်း ယခု မြောက်ပိုင်း ပါဂျောင်ဖြစ်စဉ်သည် ဆင်ခြင်တုံတရားအားနည်းမှုသည် ဖြစ်ပျက်သွားရခြင်း၏ အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်ကိုတော့ငြင်းဆိုရန်ခက်ခဲနေပါလိမ့်မည် ။ထို့ပြင် မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသားဖြစ်စဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားသမိုင်းတွင် အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။ လေ့လာမိသလောက်ဆိုရလျှင်မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားများသည် ရုပ်ကြမ်းဆန်သော ဂလဲ့စားချေရေးကိုဦးတည်လုပ်ဆောင်လိုသူမ ရှိသလောက်နည်းပါးပြီး၊ ၄င်းတို့အလိုရှိသည်မှာ ကျဆုံးသူများ၏ စွန့်လွန်မှုတန်ဘိုးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ ၊ထိုဖြစ်ရပ် မှ နောက်မျိူးဆက်သို့လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေလိုသော သမိုင်း သင်ခန်းစာ နှင့် အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များတွင် မြောက်ပိုင်းဖြစ်စဉ် သတ်ဖြတ်မှုကိုကျူးလွန်သူများပါဝင်မလာနိုင်စေရေးတို့ပင်ဖြစ်သည်ဟုနားလည်မိပါသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်များအတွက်သမိုင်းမှန်ကိုဖော်ထုတ်လိုခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ သေစားသေစေ အတွက်မဟုတ်၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလိုခြင်းအတွက်လည်း မဖြစ်သင့်.။ ဥပဒေတစ်ခု တည်မြဲရေးအတွက် ဥပဒေ ထုတ်ပြန်သူမှ ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ရုံမျှဖြင့် ဥပဒေမတည်မြဲနိုင် ။လိုက်နာကျင့်သုံးသောသူမျာ့းရှိမှသာ ထိုဥပဒေ တည်မြဲအသက်ဝင်လာနီုင်ပါသည်။လိုက်နာကျင့်သုံးဘို့ဆိုသည်မှာလည်း ထုတ်ပြန်သော ဥပဒေသည် တရားမျှတ လက်ခံကျင့်သုံးရန် ဖြစ်နိုင်သော အခြေနေရှိရမည်ဖြစ်ပါသည် ။န၀တ အစိုးရလက်ထက် ၁၉၉၃/၄ လောက်က ရန်ကုန်မြို့ စည်ပင် နယ်နမိတ်အတွင်း ကွမ်းမစားရ ၊ ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ထဲတွင်ပိုက်နှစ်ချောင်းတပ်ပြီးခေါင်းချင်းဆိုင် အအေးမသောက်ရ စသဖြင့် ထုတ်ပြူန်ဘူးပါသည်။ သို့သော် ထိုဥပဒေ မတည်မြဲခဲ့ပါ ။ယခု မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားများအလိုရှိနေသောသမိုင်းမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးသည် ဥပဒေ ထုတ်ရူ် ဖော်ထုတ်သည်ထက်ပိုပြီးသိမ်မွေ့နက်ရှိုင်းပါလိမ့်မည် ။ အဖိုးမဖြတ်နိုင်သောသမီုင်းသင်ခန်းစာများလည်း ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည် ။ ထိုသို့ သမိုင်းသင်ခန်းစာများကိုရရှိနိုင်ရန် ဖြစ်ရပ်အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း သီရှိရန်လိုပါသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်များကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် မြောက်ပိုင်း၌ နစ်နာခဲ့သူများတစ်ဘက်တည်းကဘဲဖော်ထုတ်သွားနိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဖြစ်၇ပ်တွင်ပါဝင်ကျူးလွန်ခဲ့သူများ၊ မကျူးလွန်သောလည်း ဖြစ်ပျက်နေစဉ်ကာလအတွင်း အခင်းဖြစ်ရာနေရာတွင် တည်ရှိနေသူများ ။ ဖြစ်စဉ်နှင့်လက်လှမ်းမှီသူများစသဖြင့်အားလုံးက ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှသာ မှတ်ကျောက်တင် အမှန်တရားတစ်ခု ပေါ်ထွက်လာနီုင်သည်မှာအားလုံးလက်သင့်ခံထားသည့် အချက်ပင်ဖြစ်သည် ။ ထိုသို့အမှန်တရားပေါ်ထွက်လာစေရန် ခံစားမှုထက် ဆင်ခြင်တုံတရားကို ဦးစားပေးသင့်သည်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။ နောက်ပြောလိုသည်မှာ မြောက် ပိုင်း အမှန်တရားဖော်ထုတ်သည့်ဖြစ်စဉ်မှာ ရွေကျင်သည်နှင့်လည်းတူသည် ၊ ကျောက်တူးသည်နှင့်လည်းတူသည်။ကျောက်တူးရာတွင်အချို့မှာ တွင်းထွက်မဟုတ်ဟု အလွယ်တကူသိရှိနိုင်သော်လည်း အချို့မှာအလွယ်တကူမသီရှိနိုင်ပေ။ အစစ်နှင့် ခွဲမရအောင်တူသည့်ကျောက်များလည်းရှိသည်ဟု ကြားဘူးပါသည်။ မိမိအလိုရှိရာသို့ ရွေများစုဝေးလာစေရန် ဒယ်ပိုင်းကို လှုပ် လှုပ်ပေးရသလို..၊မိမိတို့အလိုရှိသောသူများစုဝေးနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရသည်များလည်းါ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ အချိုူ့သတင်းအချက်လက်များသည် မမှန်ကန်ဟု အလွယ်တကူသိရှိနိုင်သော်လည်း အချို့မှာအလွယ်တကူမသိရှိနိုင်ပေ။ငရဲမီးစားခံနိုင်မှ ရွေစစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သလို ၊တွင်းထွက်မှန်က စစ်ဆေးတိုင်းတာနိုင်သည့် အရာများလည်း ရှိပေလိမ့်မည်။ မြောက်ပိုင်းကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်ရူ် အချို့ ဆိုပါသည် ….အချိန် မကျသေး ၊ စောသည်။ ထိုသူများကို မေးမြန်းလိုသည် ။ အချိန် ကျသည့်အခါ သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံ ရနီုင်မလား ။ မြောက်ပိုင်းအကြောင်းသိရှိထားသူများမှာလည်း သေခြင်းတရား၏လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာမရနိုင် ။ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းလို နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမူမျိုးပင် ယနေ့အထိ အမှန်တရားကို ရာနှုန်းပြည့် မရရှိနိုင်သေး။မသိရှိနိုင်သေး။ တဆက်တည်းပင် တချို့မှာ မြောက်ပိုင်းဖြစ်စဉ်တွင် မိမိ၏ဆွေမျိုးသားချင်းများမပါလို့ ။ ပါများပါခဲ့သော်…..။ ဒေါက်တာနိုင်အောင်ကိုဘာမှမလုပ်ဘဲပြန်သွားခွင့်ပေးသောမြောက်ပိုင်းကျောင်းသားများမှာ လူနုံလူအများသဖွယ် ၊ မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့် အေဘီမှတာဝန်ရှိသူများစကားလက်ဆုံကျသည် ကို ၀မ်းသာ ၀မ်းနည်း ဝေဒနာ မခွဲခြားတတ်သယောင်မချီတင်ကဲဖြစ်မှုများလည်း သိရှိရပါသည် ။ ထိုသူများသို့မေးလိုသည်မှာ ကျနော်တို့ ခံစားမှုကို ဦးစားပေးခြင်းအားဖြင့် ကျနော်တို့အလိုရှိသော တရားမျှတမှု နှင့်အမှန်တရား..ရနိုင်မည်မှာသေချာပါသလားဟု ပင်ဖြစ်သည် ။
အချူပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားများသည် ခွတ်ဒေါင်းအလံတော်ိအားဦးညွတ်လျှက်ပင်..။ အေဘီ အားတိုက်ခိုက်လိုစိတ်အလျဉ်းမရှိဟု တရားဝင် ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားများအလိုရှိသည်မှာတရားမျှတမှု (၀ါ) လူသားဂုဏ်သိက္ခာဟုပင်ဆိုချင်ပါသည်။ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှပေးလိုက်သောသင်ခန်းစာမှာ မိမိတို့အားနိုင်ထက်စီးနင်းပြုကျင့်ခဲ့သော သူများကို ပြန်လည်ဂလဲ့စားချေခြင်းထက် တရားမျှတမှုဆီသို့ဦးတည်လိုက်သောအခါ ( ၀ါ ) ခံစားမှုတွေထက် ဆင်ခြင်ထုံတရားသို့ ဦးတည်လိုက်သောအခါ လူ့သမိုင်းသည် ပိုပြီးတောက်ပြောင်လှပရူ် လူပိုပီသလာပါသည်။ မိမိတို့မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားများသည် မြန်မာနိုင်ငံတော်အားဆင်ခြင်ထုံတရား ကြီးစိုးသောလူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ရှုမြင်လိုသောကြောင့်….မှတ်ကျောက်တင် အမှန်တရားပေါ်ပေါက်စေလိုသည့်အတွက် မြောက်ပိုင်းသမိုင်းနိဂုံးချူပ်လိုပါသည်။
You, မိုး စဲ, Khine Khine Saw Lwin, B Sit Minn and 24 others like this.
Kyawzay Ya ကောင်းလိုက်တဲ့အရေးအသား ခံစားချက်ကလာတဲ့စကားလုံးတွေဆိုတာ ခံစားနားလည်ပေးလို့ရပါတယ်။ ရှယ်လိုက်မိတယ်နော်အကို
December 23, 2012 at 4:19pm · Like
သုခေတ် နဒီ အမှန်တရားတွေပေါ်လာမှသင်ခန်းစာကောင်းကိုသင်ခွင့်၇မှာပါ ဒျါမှနောက်နောင်....
December 23, 2012 at 8:09pm · Like
Thaw Zin Ohn အမှန်တရားပေါ်ပေါက်စေလိုသည့်အတွက်
December 24, 2012 at 6:38am · Like
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 9:10 PM